कानेपोखरीमामितेरी च्यालेन्ज कप हुँदै
पथरी । मोरङको कानेपोखरी–७, आइतबारेमा स्थापितमितेरी युवाक्बलको आयोजनामा ‘मितेरी च्यालेन्जकप–२०७७’ फुटबल प्रतियोगिताहुने भएको छ ।
क्लबले आइतबारेमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आगामी माघ २४ गते देखि च्यालेन्जकपको प्रतियोगिताहुनेबताएको हो । फागुन १ गते फाइनल खेल हुर्दै प्रतियोगिता सम्पन्नहुने खेल संयोजकविकल राजसिंह गुरुङले बताए ।
खेलमामितेरी युवाक्लबकानेपोखरी, सतनयुवाक्लब इटहरी, डाँगिहाट फुटबल क्लब बेलबारी, शैनिक फुटबल क्बल झापा, गाईघाट फुटबल क्लबगाईघाट, एपिएफपकली, धरान फुटबल क्लब धरान र ब्वाइज युनाइटेड काठ्माडौं सहभागीहुने क्लबकाअध्यक्षनविन सुब्बाले पत्रकार सम्मेलनमाजानकारी दिएका छन् ।
प्रतियोगितामाविजेता टिमले ५१ हजार र उपविजेता टिमले ३१ हजार, ट्रफी,मेडल र प्रमाण पत्रप्राप्त गर्ने क्लबका सचिवअनिल परियारले बताए । खेलमाउत्कृष्ट खेलाडी एकजनालाई दैनिकम्यानअफ द म्याच पुरस्कार बापत २ हजार प्रदान गर्ने भएका छन् ।
खेल अवधिभर वेस्ट डिफेन्स, वेस्ट किपर, वेस्ट स्टाईगर, वेस्ट कोच, वेस्ट मिडफिल्ड, सर्वाधिकगोलकर्ता र म्यानअफ द सिरिज लगाएतको खेलको विधामा ५ हजार, ट्रफी,मेडल र प्रमाण पत्रप्रदान गर्ने तयारी रहेको खेल आयोजक समितिले जनाएको छ । खेल दिउँसोको ठिक २ बजे देखि आइतबारे स्थित जनकल्याण माविको खेल मैदानमाहुर्दैछ ।
खेलमाकानेपोखरी गाउँपालिकाले १ लाख र ७नम्बर वडाकार्यालयले ५० हजारआर्थिकसहयोग प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी वडा नं. ७आइतबारे निवासी देव नन्द, सन्जीव र सुजन गुरुङ तीनभाईले आफ्नो स्वर्गिय पितामानबहादुर र मातातारादेवी गुरुङको स्मृतीमा खेलको प्रथम पुरस्कार ५१ हजार प्रदान गर्ने भएको छ ।
त्यसैगरी वडा नं. ७आइतबारे निवासी टंकराजलिम्बु र राजेश राईले खेलको दोस्रो पुरस्कारको राशी ३१ हजार सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ । टेन्सवर्ग वियरले १ लाख १० हजार खेलमालगानीगर्दै खेलको प्रमुखप्रायोजकको रुपमा रहने आयोजकले जनाएको छ । खेलमाजम्मा७लाखहुने बताएका छन् ।